Ezigbo ndị ọchụnta ego na ndị na-ebubata ya, na nso nso a, achọpụtara na enwere ụlọ ọrụ na ndị mmadụ na-eji aha na adreesị ụlọ ọrụ anyị (Shijiazhuang Mets Machinery co., Ltd NO.1 Changjiang Road Shijiazhuang 050035 Hebei China Tel: 86-311-68058177 ) na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ...GỤKWUO »
Ekelere ndị ọrụ ngalaba ọrụ aka maka mmeri tii teknụzụ
Onyinye otu onye kelere ndị ọrụ aka ọrụ ngalaba maka imeri akara ugo mmụta technical ngalaba ndị ọzọ ga-agbaso ihe nlereanya ha. GỤKWUO »
Mmiri na-abịa, oge maka ikpori ndụ!
Mmiri na-abịa, oge maka ikpori ndụ! Ndị mmekọ niile nke ụlọ ọrụ ahụ gbakọtara na nkwụsị nke n'okporo ámá jianhua na ụzọ mgbanaka mgbago ugwu nke abụọ. Routezọ anyị na-agba ịnyịnya bụ ebe nchịkọta na-ewere ụzọ nke Hutuo River-Zhengding South Gate-Retrace nzọụkwụ anyị na onye ọ bụla nwere igwe kwụ otu ebe. Anyị na e ...GỤKWUO »
Companylọ ọrụ anyị na-agbaso echiche nke ịdị mma gburugburu ebe obibi na nchekwa nchekwa akụ. N'oge na-adịbeghị anya ọnọdụ nchebe gburugburu ebe obibi dị njọ, ụlọ ọrụ anyị na-aza nke ọma ma na-arụpụta nchebe gburugburu ebe obibi. 1. Kpochapu ulo oru ochie na iwebata ihe di elu ...GỤKWUO »
Na-eme asambodo abuo nke ulo oru anyi.
Hebei Hanchang mineral Co., Ltd. agafeela ISO9001 àgwà management usoro asambodo, OHSAS18001 ọrụ ahụ ike na nchekwa management usoro asambodo na September 1, 2017. Ọ na-egosi na anyị ụlọ ọrụ ruru mba ọkọlọtọ na mwekota nke dị iche iche managem ...GỤKWUO »
Mgbe ị na-ejikwa slurries, ndị ọrụ na-aghakarị ịhọrọ n'etiti ihe ndị a na-etinye na roba ma ọ bụ nke ígwè maka nfuli slurry ha. Isiokwu 1 na ngwụsị nke isiokwu a prov ...GỤKWUO »
Akụkụ nke mgbapụta slurry
Impeller The impeller, ma elastomer ma ọ bụ elu-chrome ihe onwunwe, bụ isi n'usoro akụrụngwa nke ejikari nwere vanes iji nye ndị centrifugal ike na mmiri mmiri. Casing Split n'èzí casing halves nke na-eyi liners na-enye elu ọrụ mgbali ike. Iheanyi sha ...GỤKWUO »
Nabata ndị ahịa mba ọzọ ileta ụlọ ọrụ anyị! GỤKWUO »
Mgbapụta ụlọ ọrụ na nyocha
1.1 ụlọ ọrụ mgbapụta nwere ogologo akụkọ ihe mere eme mgbapụta bụ igwe ochie. Mba Europe a mbụ-ọnụego mgbapụta factory wuru na n'etiti narị afọ nke 20, ihe karịrị 10 dị ka United States Wortington ụlọ ọrụ e wuru na 1980, Ingersoll Rand-ụlọ ọrụ e wuru na 1860, Byron-Jackson comp ...GỤKWUO »
Kedu otu mgbapụta slurry centrifugal si arụ ọrụ?
Dị ka ọtụtụ nfuli, mgbapụta centrifugal na-agbanwe ike igwe site na igwe rue ike nke mmiri na-agagharị; ụfọdụ n'ime ume na-abanye n'ime ike ọrụ nke mmegharị mmiri, na ụfọdụ n'ime ike ike, nke nrụgide mmiri na-anọchi anya ya ma ọ bụ site na ibuli mmiri ahụ megide ike ndọda na ọkwa dị elu. Maka ndị ọzọ ...GỤKWUO »